musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » North Korea ichisiya kushanya? Bvunzo moto chombo
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • North Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Mutungamiri weNorth Korea Kim Jong Un nhasi aona kuyedzwa-kupfurwa kwerudzi rutsva rwechombo chinotungamirwa chombo.
Korea Central News Agency yakati Sachigaro Kim Jong Un akacherechedza kupfurwa kwechombo Chitatu neChikamiro cheDziviriro Sayenzi.
Sekureva kwebepanhau reBeijing reGlobal Times, North Korea inoda kudzora nhanho dzekushanya sezvo vazhinji vekunze vari kuenda munyika.
Sangano rinotaura kuti Kim akati "kuvandudzwa kwehurongwa hwezvombo kunoshanda sechiitiko chakakosha kwazvo mukuwedzera simba rekurwa reVanhu veHondo."
Sangano rinoti Kim akaisa posvo yekucherechedza kuti adzidze nezve muyedzo-moto weiyo nyowani-mhando tareti inotungamirwa chombo uye tungamira bvunzo-moto.
Chiziviso chakauya mushure memishumo yechiitiko chitsva kuNorth Korea zvombo zvekutsvagisa nzvimbo nenzvimbo refu yedombo apo kuchamhembe kunofungidzirwa kuvaka zvombo zvehurefu zvakanangana nenyika yeUS.
White House yakati yaiziva nezvechirevo ichi uye haina mhinduro.